Huddle Inoita Kubatana Kwepamhepo uye Faira Kugovana Nyore
Kuburitsa kunze kana kuronga mushandirapamwe wekushambadzira unosanganisira manejimendi manejimendi uye kubatana mabhodhoro. Ini ndinobheja iwe unoguta nekuita shanduko isingaperi kuVPN kana firewall kumisikidza kuita kuti kuwedzere kubatana. Mikana ndeyekuti urikushandisa chero isingachashandi intranet kana SharePoint. Kuchinjira kune isina musono chiitiko icho chakavakirwa gore dzinoungana workspace inopa yaizoita kubatana uye zvemukati manejimendi chiitiko chinonakidza kwete pane chinonetesa uye chekupwanya tsinga izvo zvava izvozvi.
Yakashandiswa nenzira kwayo, dzinoungana ine mukana wekutsiva email seye de facto faira rekugovana uye yepakati yekubatana. Inopa sarudzo dzinochinja-chinja kugadzira, kuchengeta uye kugovana magwaro, inobvumidza machena kana hurukuro, inofambisa kushanda nevamwe pagwaro rimwechete uchichengeta mhando dzeshanduro kana shanduko uye kugadzirisa kufamba kwebasa, nezvimwe zvakawanda. Iyo inosanganisa ingangoita ese mapurojekiti ekushandisa maturusi, uku ichisanganisa nhare nemavhidhiyo musangano, uye nharembozha.
Huddle inopawo Huddle Sync, kuti ikubatsire iwe gadzirisa bhizinesi rako mafaira zvine hungwaru, kwete kungoenderana. Inotungamirwa ne-patent-yakamirira tekinoroji yekufungidzira, inosarudza iyo mafaira ayo achanyanya kufarira iwe.
Kunyoresa kunokurumidza uye kuri nyore, nebhizimusi ichiwana yakasarudzika Huddle URL uye peji rekupinda mumaminetsi mashoma. Iye mushandisi anobva atadzisa kupinda kune iyo yese dhatabhesi dhatabhesi kana kune emunhu nzvimbo dzekushandira, zvichibva pane yakatarwa kero dzeIP kana nekushandisa iyo granular mvumo sarudzo.
Dzese idzi sarudzo dzinouya dzakabatanidzwa neyakareba nhanho yekuchengetedza, iine 256-bit SSL, indasitiri standard encryption, SAS70 yerudzi rwechipiri odhita uye nezvimwe. Kuonekwa kuzere pamusoro pezviri mukati, sarudzo dzakasimba dzekutsvaga, kugona kuwana magwaro kumadhibhodhi akawanda kubva pama desktops kuenda kuApple smart mafoni uye kubva kuBlackberries kuenda kuPad, inosanganiswa nehungwaru hwekufananidza hunhu hunogadzirisa magwaro pazviridzwa, zvinopa mukana wepamusoro kuzvidzora.
Vanokurudzira ve dzinoungana ziva kuti saizi imwe haikwane zvese, uye upe sarudzo dzakawanda. Mutengo unoenderana nezvinodiwa nemunhu, neyakajairwa sarudzo inodhura chete gumi muzana yeSharePoint yakazara mutengo wevaridzi. Enda kune yemahara muedzo kana kuti utenge pakarepo.
Tags: kugovera fairahudyuhuddle synckubatana kwepamhepo